RASMI: Chelsea oo la iibsaday… (Ka bogo cidda la wareegtay mulkiyadda kooxda Blues, faah-faahinta heshiiska & Guulaha ay gaartay boqortooyadii uu dhisay Roman Abramovic) – Gool FM
RASMI: Chelsea oo la iibsaday… (Ka bogo cidda la wareegtay mulkiyadda kooxda Blues, faah-faahinta heshiiska & Guulaha ay gaartay boqortooyadii uu dhisay Roman Abramovic)
Ahmed Nur May 7, 2022
(London) 07 Maajo 2022. Maal-qabeenkag lagu magacaabo Todd Boehly ayaa si rasmi ah u noqday milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea kaddib markii uu dhammeystiray heshiis uu kaga iibsaday Roman Abramovic kaasoo qiimo ahaan ku kacaya 3.5 bilyan oo gini.
Shuraakada ganaci ee uu Boehly hor kacayay ayaa ku guuleysatay in bankiga Raine Group uu ku wareejiyo mulkiyadda iyo lahaanshaha kooxda Blues kaddib markii ay noqdeen dalbadayaasha ugu mudan sida uu bankiga loo wakiishay iibinta kooxda faca weyn u arkay.
Maal-qabeenka Mareykanka ah waxaa shuraakada ku wehliya maal-qabeenka la leh mulkiyadda kooxda baseball-ka ciyaarta ee LA Dodgers ee Mark Walter, bilyaneerka reer Switzerland ee Hansjorg Wyss iyo sidoo kale shirkadda maal-gashiga ee Clearlake Capital.
Boehly ayaa loollanka iibsiga naadiga Chelsea ku garaacay shuraakooyin ganacsi oo ay kala hoggaaminayaan Stephen Pagliuca iyo Sir Martin Broughton iyo dalab ku kacayay 4.25 bilyan oo gini kaasoo ka yimid ninka ugu hodansan dalka Britain ee Sir Jim Ratcliffe.
Kooxda ku ciyaarta garoonka Stamford Bridge ayaa barteeda rasmiga ah ee Interner-ka ku baahisay bayaan ay ku faah-faahineyso heshiiska kaasoo u dhignaa sidan: “Kooxda kubadda cagta Chelsea waxay xaqiijineysaa in lagu heshiiyay in mulkiyadda kooxda ay la wareegaan koox ay hoggaaminayaan Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter iyo Hansjoerg Wyss kuwaasoo kooxda iibsaday.
“Qiimaha guud ee lagu kala wareegsaday, 2.5 bilyan oo ka mid ah waxaa lagu iibsan doonaa saamiga kooxda iyo in qayb ka mid ah la dhigo koontada keydka ee bankiga boqortooyada UK taasoo loogu talo galay 100% in sadaqo ahaan loo bixiyo sida uu xaqiijiyay milkiilhii hore ee Roman Abramovic, dowladda Ingiriiska ayaana fasixi doonta lacagaha tabarrucaadda ah in laga bixiyo bankigeeda.
“Waxaa intaas dheer, milkiilayaasha cusub inay qorsheeyeen in 1.75 bilyan oo gini ay ku maal-geliyaan kooxda si ay faa’ido ugu noqoto, waxaana maal-gelinno lagu sameynayo gegada Stamford Bridge, kulyadda dhalinyarada kooxda, kooxda haweenka iyo in lacago la gaarsiiyo hay’adda Chelsea Foundation.
“Iibinta kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la dhammeystiri doonaa daba-yaaqada bishan marka la gabo-gabeeyo waraaqaha iyo saxiixyada sharciga ah, markaas ayaana la filayaa inay faah-faahinno kale oo dheeri ah ay soo baxaan” ayuu u dhignaa qoraalkii naadiga ka dhisan galbeedka magaalada London.
Si kastaba ha ahaatee, hubanti la’aan baahsan ayaa ku hareersaneyd mustaqbalka naadiga Chelsea tan iyo markii ay dowladda Ingiriiska xannibaad dul dhigtay mulkiilihii kooxda ee Roman Abramovic iyadoo ku eedeyneysa inuu xiriir la leeyahay madaxweynaha Ruushka ee Vladamir Putin kaasoo ku duulay dalka dariskiisa ah ee Ukraine.
Balse haatan, Todd Boehly ayaa mulkiyadda kooxda kala wareegay Abramovic kaasoo ka tagaya boqortooyadii uu dhisay sanadkii 2003.
Blues ayaa intii uu iska lahaa mulkiyaddeeda maal-qabeenka reer Russia ku guuleysatay shan jeer horyaalka Premier League, shan FA Cup, saddex League Cup, labo Community Shield, labo Champions League, labo Europa League, hal UEFA Super Cup iyo hal FIFA Club Wolrd Cup.
Horudhac: Liverpool vs Tottenham Hotspur... (Kulan ay wada xiiseynayaan kooxaha ku dagaallamaya afarta sare iyo kuwa ku loollamaya horyaalka)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo Wolverhampton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey